Ngoku ekubeni amabandla kunye neecawe zingena kwi-intanethi ngamaxesha e-corona, akufuneki baphose umyalezo wosindiso ngoYesu Krestu kwabo bangasindiswanga.
Ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile, ayehamba aye kushumayela ezitratweni nakwiindawo zembutho. Namhlanje, izitrato kunye neenkundla zikwi-intanethi. Masiphume apho bakhoyo abantu abakhoyo ezitratweni zanamhlanje kunye nezikwere: umnatha.
Ndiphume wonke umnatha
UYesu wathi masiphume siye kulo lonke ihlabathi kwaye sishumayele iindaba ezilungileyo kuyo yonke indalo.
Namhlanje, umhlaba ukwi-Intanethi. Abantu bakwi-intanethi kwiiforamu ezahlukeneyo nakwezoluntu. Ke ayisiyonto imbi ukuba siye nakwi-intanethi siye ubungqina ubungqina ngoYesu kwabo basebenzayo apho.
Owona myalezo ubaluleke kakhulu
Nje ukuba siye ezitratweni nakwizikwere zanamhlanje, masingasilibali umyalezo obalulekileyo esinawo kwabanye abantu abakhoyo. Igama likaYesu Krestu kwaye ukuba uyakusindiswa xa umamnkele.
Kufuneka sijolise kakhulu kubantu abatsha nakwabasindisiweyo. Ukuze singaguquki kwabo sele besindisiwe kwaye sishumayele kubo kuphela. Hayi, kufuneka sifike kwabo bangasindiswanga. Ke masishumayele kubo.
Musa ukuwela kumgibe
UThixo undibizele umshumayeli weendaba ezilungileyo, kodwa ndiqaphele indlela ekulula ngayo ukwazisa ukushumayela Kwakhe esele sigciniwe. Masingaweli kuloo mgibe.
Kuba ukuba asishumayeli usindiso kwabangasindiswanga, abayi kuva umyalezo kaYesu kwaye abayi kuba nalo ithuba lokusindiswa. Ndiyaphinda ndiyithi: masingaweli kumgibe wokungashumayeli kwabangasindiswanga kodwa kwaba basindiswayo kuphela.
Ndiqaphele nokuba xa sishumayela uMyalezo wosindiso kwabo bangasindiswanga, abo sele besindisiwe baya komelezwa kwaye bakhule elukholweni lwabo. Bayakhuthazeka elukholweni lwabo njengoko sishumayela umyalezo wosindiso olungagcinekiyo kuYesu Krestu.
Vecka 18, lördag 8 maj 2021 kl. 14:34